सिभिल थ्रीडी, एक पign्क्तिबद्ध बनाउनुहोस् (पाठ)) - जिओफुमाडास
दुई अघिल्लो पाठहरूमा हामीले देख्यौं कसरी अंक आयात गर्न y तिनीहरूलाई अनुकूलन गर्नुहोस्। अब हामी स्टेशनहरु को रूपमा अंकित अंकहरु बाट एक पign्क्तिबद्ध गर्न चाहन्छौं।
पिललाइन सिर्जना गर्नुहोस्
यसको लागि, हामी पोलीलाइन कमाण्ड प्रयोग गर्छौं र हामी नोडहरूमा स्नाप आदेश प्रयोग गर्दछौं। हामी प्रारम्भिक स्टेशनबाट अन्तिममा जान्छौं।
संरेखण सिर्जना गर्नुहोस्
यसका लागि हामी "पङ्क्तिबद्धता / पललाइनबाट संरेखण सिर्जना गर्नुहोस्"
त्यसोभए हामी पोलिलाइनलाई छुन्छौं र एउटा प्यानल खडा गरियो कि अहिलेको लागि हामी एलाइनमेन्टको नाम दिन भन्दा बढी ध्यान दिदैनौं। हामी यसलाई "Calle Mel Zelaya" कल गर्ने छौं
अनि त्यहाँ मेरा साथीहरू छन्।
ओह, तपाईं सतह सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ?
सतहमा नयाँ, दाँया बटन र यो राम्रोसँग कल गर्न सक्छ "भूतल ह्यूगो चावेज"
अब दाँया "परिभाषा / बिन्दु समूह" मा क्लिक गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि ती सबै बिन्दुहरू सतह बनाउँने हुन्।
ठिक छ, म त्यहाँ कन्फ्युज भइरहेको पछि हामी जारी रहन्छौं। प meantime्क्तिबद्धताबाट र सिर्जना गरिएको सतहमा प्रोफाइलहरू सिर्जना गर्न यसै बीचमा प्रयास गर्नुहोस्।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो सिभिल 3D, सडक डिजाइन,2पाठ
अर्को पोस्ट गुगल अर्थमा भिडियो राख्नुअर्को »
१ Civil जवाफ "सिभिल थ्रीडी, एक प Al्क्तिबद्ध बनाउनुहोस् (पाठ))"
जर्ज कास्टेलियो भन्छिन्:
नमस्ते साथीले मलाई बताउन सक्छ कि कसरी एक पङ्क्तिबद्ध माध्यमबाट तपाईंको पार्कमा पहिले नै एक पङ्क्तिबद्ध प्रोफाइल बनाउन सकिन्छ
आर्मिङ रमाइरिज भन्छिन्:
मलाई एक पङ्क्तिबद्ध गर्न आवश्यक छ (आटोक्याड 2014 मा पोलिलाइनa रहनुहोस्
तपाईंले कसरी पत्ता लगाउनुभयो?
alex ventura भन्छिन्:
पङ्क्तिबद्धता इन्चमा आउँदछ, किनकि म मेरो लागि मेट्न वा मेरो वास्तविक दूरीमा गर्छु
मँ चाहन्छु कि तपाईं मलाई प al्क्तिबद्धतालाई dd पोलीलाइनमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ ..... सिभिलdडीले मलाई पिटेको छ …… ..
यस समस्यामा मलाई कसले समर्थन गर्न सक्छ भनेर धन्यबाद।
हेलो फ्रेंड्स यो धेरै रोचक योगदानको लागि धन्यवाद धन्यवाद बधाई हो, सावधान रहनुहोस्, यदि सडक सेक्शन धेरै लामो छ भने म यी भागहरु खण्ड गर्न सक्छु
जब तपाईं एक पङ्क्तिबद्ध सिर्जना गर्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, एक पलिलाइनबाट सिर्जना गर्नुहोस्, र तपाइँ गुणहरू असाइन गर्न प्यानल प्राप्त गर्नुहुन्छ, तेस्रो बक्स भनिन्छ।
"सुरूवात स्टेशन" ले तपाईंलाई सुरूवात बिन्दु राख्न दिन्छ
यो पहिलो पटक मैले यो साइट हेर्नको लागि खुशी छ।
यो एकदम चाखलाग्दो छ… ..
मसँग एउटा प्रश्न छ ... माइलेज कसरी परिवर्तन गर्ने म यो तरीकाबाट चाहन्छु
० + १२0.२123.25…। तर म यस प्रकार देखा पर्‍यो १ + २.1.२23.25 र मैले यसलाई ठीक गर्ने कुनै उपाय फेला पारेन ... मलाई भन ... धन्यबाद तपाईंलाई अभिवादन गर्नुहोस्…।
1 एकचोटि मैले साइट देखें म यो रोचक लाग्छ के तिनीहरूले यसलाई राख्न को लागी,
मसँग थोरै यात्राहरू थिए, र कम विद्यालयले मेरो केटाहरूलाई काम गर्दछ।
तर हामी देख्नेछौं।
सलाम मित्र यसको विषयवस्तुहरू धेरै रोचक egeomates, म त प्रति elevations लेबल परियोजना किलोमिटर र स्थान तेर्सो र ठाडो परियोजना, प्राकृतिक भू-भाग, उचाइ काटन आयाम को पानाहरू सिर्जना गर्नुहोस्, क्रस सेक्सन र मात्रा गणना सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ भरने र abscissa।
मलाई आशा छ कि तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद
नमस्ते अल्फोन्सो, रमाईलो विषय, म यसको बारेमा कुरा गर्न चाहान्छु। म केहि समय लिन्छु, जब म मेरो यात्राबाट फर्कन्छु ... म आशा गर्दछु यो ढिला भएन।
नमस्ते साथीहरु geofumadas…। यो प्रोग्रामको साथ तपाईबाट एक उत्कृष्ट योगदान हो राम्रो र फराकिलो नागरिक3डी को रूपमा व्यापक ...। म सिभिल इन्जिनियर हुँ र म तपाईलाई कृपया मलाई कुनै खास मुद्दामा मद्दत गर्न चाहन्छु जस्तै दुई सतहहरु बीच भोल्युम को हिसाब तर आयत द्वारा सीमित ... कि भन्नु छ, भूमि को क्षेत्र मा ... र यदि खण्डहरु को गणना संग तालिका सँगै प्रस्तुत गर्न सकिन्छ सेक्सनहरूको साथ जहाँ तपाईं रेखाहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन मूल भूमि परिभाषित गर्दछ र रेखा जहाँ कटिएको छ…। अग्रिम धन्यवाद र मँ तपाईको जवाफलाई चाँडै नै हेर्छु ... ..
यसलाई राख्नुहोस्… .. अभिवादन